ISierra Club Ivumela Ukudonswa Kwemvelo - I-Ellicott Dredges Blog
ISierra Club ivumela ukwehla kwezemvelo: inhloso ukuhlanza umfula i-Ashtabula ongcolile
Ngokubambisana okungajwayelekile, abezemvelo, abangcolisa imvelo, omasipala bendawo kanye ne-Environmental Protection Agency basebenza ngokubambisana ukususa lo doti onobuthi ovale umfula i-Ashtabula eduze neLake Erie.
Umgomo wabo ojwayelekile ukuqala ukukhipha umfula ngaphandle kweminyaka yezomthetho kanye nezifundo ezijwayelekile zokuhlanza okwenziwe ngaphansi komthetho weSuperfund.
Izendlalelo zezinsimbi ezisindayo nama-PCB abangela umdlavuza zingcolise ulwandle olungaphansi komfula.
Ukudonswa phansi ngeke kugcine ngokungcolisa ukungcola kuphela kepha kuzobeka ukugcwala kwesikebhe esiteshini esingena eLake Erie e-Ashtabula, ekhoneni elisenyakatho-mpumalanga ye-Ohio.
“Akuyona inkinga yezemvelo kuphela. Ludaba olubucayi kakhulu kule ndawo, ”kusho uJohn Mahan, ongumxhumanisi we-Ashtabula River Partnership, okuyinhlangano ehlangene yabezemvelo, abalawuli, abangcolisi bomasipala kanye nomasipala.
Izintshisakalo ezahlukahlukene zahlanganiswa isipiliyoni seFields Brook, umfudlana oseduze nomfula oseduze eminyakeni edlule owabekwa ohlwini lwe-EPA Superfund lwezinkinga zokungcola ezicindezela kakhulu zesizwe.
Njengakwezinye izingosi ze-Superfund, izindleko zikhuphukile futhi umsebenzi wokuhlanza wangempela uye wabambezeleka. Kwakunokuvumelana ukuthi bekumele kube nendlela engcono. Kuze kube manje, ukubambisana kuyasebenza. Lokhu nje ukuwa kweCongress kungeze ulimi emthethweni wokukhishwa kwemali we-EPA onxusa i-ejensi ukuthi ingabe isakhipha ama-oda wokwehla.
Kwakungeyona impoqo, kodwa “ukuthambekela kuyakhathaza,” kusho u-Emily Green, uchwepheshe we-Great Lakes nehhovisi laseSierra Club eMidwest. "Uma bezama ukuyiphusha futhi ngonyaka ozayo, kuzoba nomthelela omkhulu emachibini."
Ukudonsa imvamisa kuyindlela yokukhetha yokuhlanza ngoba ihlala unomphela futhi ivimbela ukungcola ekukhukhulekeni komfula, kusho uGreen.
Ishicilelwe kabusha kusuka eBaltimore Sun nge-Associated Press